पार्टीभित्रको समस्या समाधानको लागि ‘नयाँ आधारमा नयाँ एकता’गर्नुपर्छ, छलफल सकारात्मक छ : देवेन्द्र पौडेल – newslinesnepal
पार्टीभित्रको समस्या समाधानको लागि ‘नयाँ आधारमा नयाँ एकता’गर्नुपर्छ, छलफल सकारात्मक छ : देवेन्द्र पौडेल
प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार १९:२३
काठमाडौं, २० असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अहिले देखिएको पार्टीभित्रको समस्या समाधानको लागि नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् । उनले पार्टीभित्रका समस्या सुल्झाउनका निम्ति औपचारिक बैठकको निरन्तरता भन्दापनि “साईड होमवर्क”हरु गरी बैठकलाई टुँगो लगाउन स्थायी कमिटी बैठक स्थगन् गरिएको र अहिले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, र बरिष्ठ नेताहरुपनि गृहकार्यमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,’दुवै तिरका विभिन्न पक्षका साथीहरु स्वयम दुवै अध्यक्षहरु, र अरु सिनियर साथीहरु पनि होमवर्कमा छन् ।’
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेकपालाई कुनैपनि हालतमा फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘हाम्रो पुस्ताको खासगरी आफ्नो तहका साथीहरुबाट कुनैपनि हालतमा नेकपालाई फुट्न दिँदैनौं । यो प्रतिबद्धता म तपाईहरुलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यो किनभने जनताको हितमा पनि छैन् । स्वयम सिनियर नेताहरुको हितमा पनि छैन् । संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका पाँच वटा कुराहरु त्यो कार्यान्वयनको हितमा पनि छैन् । र, संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको अन्तिम कुरा समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली ल्याईनेछ भनिएको छ । त्यो प्राप्ति गर्नको निम्ति पनि पार्टी टुटफुट र विभाजनले त्यहाँ लैजाँदैन ।
उनले आफूहरुलाई फुट र विभाजन कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नभएको बताउँदै पार्टी एकताका लागि देशैभरिका साथीहरुले खबरदारी गर्ने काम गरिरहेको पनि जनाए । उनले थपे,‘यसको लागि साथीहरुले केन्दीय कार्यालयमा गएर धर्ना बस्ने, अपिल गर्ने र अनुरोध गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । म पनि दृढतापूर्वक त्यही मतको पक्षमा छु ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले पार्टीमा देखिएको समस्या मिलाउन सक्ने कुरा भनेको अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्नुपर्ने पनि आवश्कत्ता औंल्याए । उनले जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रकट भएका विषयहरुलाई बढि प्रोभोक गरेर तन्काएर भन्दा कार्यविभाजनमा सन्तुलित जिम्मेवारीहरुको बाँडफाँड गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘जस्तो सिनियर साथीहरुको हकमा त्यसको साथसाथै दुई अध्यक्षको बीचमा पार्टी एकता हुँदाका सहमतिहरु, पार्टी एकतापछि विभिन्न चरणमा भएका डिसिजनहरु, सहमतिहरु र सहकार्यका निम्ति यसरी जाउँ भनेर एकले–अर्कोलाई विश्वस्त पारेको कुरातिर फर्केर हामीले नयाँ आधारमा नयाँ एकता खोज्नुपर्छ ।’
सरकार गठन भएपछि पार्टी एकतामा देखा परेका समस्याका कारण पार्टीले नयाँ आधारमा नयाँ एकता खोजेको उनको तर्क छ । ‘अहिले विकसित भएका परिस्थितिहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति, कुटनीतिक प्रणालीलाई अझै सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनको निम्ति, देशभक्ति भावनालाई अझै जगेर्ना गर्नको निम्ति नेकपा अझै मझबुद र नयाँ आधारमा अझ बढि चाहीँ एकीकृत हुन आवश्यक छ ।’–उनले प्रष्ट्याए ।
नेता पौडेलले आफूहरु नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सबैको चाहना एकता नै हो । त्यसको पक्षमा हामीले लविङ्ग गरिरहेका छौं । हिजो (शुक्रबार) पनि दुई अध्यक्षबीच तीन घण्टा कुरा भएको छ । उहाँहरुबीच कुरा हुनु । बैठक र छलफल हुनु भनेको पनि अब मिल्ने दिशामा अघि बढ्नु हो । आजपनि विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् । पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ । बचाउनुपर्छ । एकीकरणबाट तलमाथि हुन दिनुहुन्न भन्नेमा नै हामी छौं ।’
अब हुने भनिएको ‘नयाँ आधारमा नयाँ सहमति’ भनेको के हो ? भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने, कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्नेतर्फ अब पार्टीको बहस हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले विदेशबाट फर्किएर आउने लाखौं युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरातर्फ पार्टी र नेताहरु बढि गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । अबपनि पार्टीलाई कुर्सी र पदको खेलमा लैजान नहुने उनको तर्क छ ।
उनले भने,‘फेरि पनि पदको निम्तिमात्रै छलफल गरेर जनताले छुट दिँदैनन् । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको यो ७० वर्षको ईतिहासमा धेरै जना साथीहरुको योगदान छ । त्यो कुरालाई कसैले पनि नजरअन्दाज नगरौं ।’ उनले पार्टीभित्र अहिले देखिएको समस्या हल गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नै भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सबभन्दा पार्टीको कार्यकारीको हैसियतले र अध्यक्षको हैसियतले यो समस्या सुल्झाउने पहिलो जिम्मेवारी कमरेड केपी शर्मा ओलीको हो । पहिलो जिम्मेवारी उहाँकै हो । उहाँको कोर्टमा बल छ । उहाँलाई हामीले भेटेर पनि भनेका छौं । सुझावपनि पठाएका छौं । यो बेलामा उत्तेजित भएर वा आवेग प्रकट गरेर कसैको भड्काउमा लाग्ने होईन् । पार्टीभित्र आईपरेका समस्याहरु सुल्झाउनको लागि सबभन्दा बढि जिम्मेवार भएर तपाई लाग्नुहोस भनेर हामीले भनेका छौं । दोस्रो, त्यतिकै जिम्मेवारी हाराहारी अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि कमरेड प्रचण्डको हो । उहाँलाई पनि हामीले त्यही भनेका छाौं । अध्यक्षद्धयले यो पार्टीलाई टुटफुटतर्फ होईन कि अझ नयाँ सहमति र नयाँ एकताको विन्दु हुँदै अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
उनले राजनीतिमा ईमानदारिता हुनुपर्ने भन्दै त्यो सबैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘त्यो प्रस्तुत गर्नको निम्ति दुवै जिम्मेवार कमरेडको बीचमा के–के सहमति भएका थिए । को–को साथीहरु राखेर सहमति गर्नुभएको थियो ? हिजो सहमति हुँदाका साक्षीहरु नै राखेर उहाँहरु हिजो बालुवाटारमा छलफलमा बस्नुभयो । हामीले पनि त्यही भनेका थियौं । त्यही आधारमा छलफल चलेको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यो नराम्रो कुरा होईन् ।’–पौडेलले भने ।
उनले ‘एक व्यक्ति, एक पद’बारे पार्टीमा पहिलेदेखि नै छलफल चलेको उल्लेख गर्दै त्यो चाहीँ आजको आजै कार्यान्वयन गर भनेर अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘कमसेकम त्यो प्रक्रियामा पार्टीलाई जाने सहमति गरौं । सबै सिनियर नेताहरुले जिम्मेवार प्राप्त गरुन् । सरकारको जिम्मा लिनेले सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अरु जिम्मेवार कम लिने । र, पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउनको लागि अरु जिम्मेवारी कम लिईयो भने सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी ढंगले चल्छ । अहिले दुवै चलेका छैनन् । सरकार पनि राम्रोसँग चलेको छैन् । केही कामहरु भएका छन् । भएका कुरा हामी भन्छौं । तर, अझ बढि हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना छ । त्यसको निम्ति त अझ बढि केन्द्रिकरण हुनुपर्यो । पार्टीपनि राम्रोसँग चलिराखेको छैन् । यो पार्टी एकताको लागि दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपनि यसमा पूर्व प्रधानमनत्रीहरुको पनि उत्तिकै भूमिका छ । उहाँहरुको पनि कार्यविभाजन गरेर जानुपर्छ ।’
आवश्यक नै पर्यो भने आफूहरु दोस्रो पुस्ताका नेताहरु कुनैपनि नेताको गुट समातेर नबस्ने पनि उनले नेतृत्वलाई चेतावनी दिए । उनले भने,‘तपाईहरुको ईगोमा पार्टी अल्झियो भने चाहीँ कुनैपनि गुट समातेर हामी अगाडि बढ्दैनौं भनेर खबरदारी पनि गरेका छौं । त्यसको लागि पनि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित् भएर नेताहरुबीच विभिन्न तहमा छलफल अघि बढिरहेको छ ।’
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता गर्ने, अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको सम्पूर्ण जिम्मा दिईने र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न माधव नेपालको नेतृत्वमा छुट्टै बडी बनाउनेगरि सहमति कायम गर्ने विकल्पबारेपनि हल्ला चलेको छ नि भनेर पत्रकार ऋषि धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘यो प्रस्तावित विषय हो । अहिले कोरोनाको यत्रो महामारी छ, यस्तो बेलामा सरकारको राजीनामा माग गर्नु सान्दभर्भिक छैन् भन्नेपनि तर्क छ । अहिले विभिन्न अप्सनमा छलफल चलिरहेको छ । दुवै अध्यक्ष अस्तिभन्दा आज निकै गम्भीर हुनुभएको छ । अतिवादबाट जोगिएर पार्टी एकताको लागि तयार हुनुपर्छ । नेताहरुले पनि एकताको लागि खबरदारी गरिरहनुभएको छ । पार्टी कार्यालयमा गएर नेताहरुले नफुट भनेर भन्नु ठीक हो । प्रधानमन्त्री ओली अहिले गम्भिर हुनुभएको छ । उहाँले समस्या समाधान गर्न खोजेको हामीले महशुस गरेका छौं ।